Isingxobo sezinto zokubhala, isingxobo seCosmetic, isingxobo seKhompyutha-Camei Ele&Stationery
Iimveliso zethu zenziwa ikakhulu kwi-2: kwi-high-frequency workcraftsship njengeengxowa zokufayilisha, i-ring binder, ibhodi yokunamathisela, isikhwama sepensile, isikhwama sokugcina; ekuthungeni umsebenzi onje ngepotfoliyo, i-zipper binder, isingxobo sepensile, ibhegi yokuthenga, ibhegi yokuthambisa, ibhegi yekhompyuter njl.njl.
Uyilo olubanzi lokuvala uziphu lwekhaki olujonge...
Le ngxowa yepensile yeCa-Mei yenzelwe ukugcina...
Uyilo oluncinci lwekhaki olujonge kushicilelo lwefashoni ...
Imilo yekhaki yesikwere ijonge kwifashoni eprintiweyo...
Hexagon shape compact mirror ngemibala emi-2 avai...
Esi sipili sokwenza i-Ca-Mei sibonisa i-polyester ma...
Ubhaka wePVC ocacileyo ocacileyo we-3D weunicorn one ...
Le ngxowa yokuthenga yeCa-Mei ineempawu zePVC...
Ingxowa yefashoni ye tassel yesikhumba yokuthambisa...
Le ngxowa yokuthambisa yeCa-Mei yenzelwe ukugcina kunye ...
Ubhaka omhle we-3D we-unicorn omenyezelayo wePVC one ...
Le ngxowa yokuthenga yeCa-Mei ineempawu zePV ezimenyezelayo...
Ibhegi epholileyo yokuthenga, kwindawo ethengiweyo...
Imibala emi-5 ibhegi yokuthenga elungelelanisiweyo yebhanti...
Le ngxowa yolonwabo kunye ne-eye catching bag iza ne-5 col...
Ingxowa yesandla eyothulweyo ibenyezelayo yeplastiki ecacileyo h...
Le bhegi yolonwabo kunye neyokutsala amehlo yakhiwe kakuhle...
Igama lepokotho yekhadi lomphathi wetyala leshishini le-ID Ityala...
Le Ca-Mei ingxowa yekhadi ephathwayo kwabo w...
I-Quanzhou Camei Stationery Bag yasekwa ngo-2003, elishishini kunye neshishini lorhwebo, elikhethekileyo kuphuhliso, ukuvelisa, ukuthengiswa kweengxowa kunye nezinto zokubhala. Siphumelele iziqinisekiso ze-ISO9001, BSCI, SEDEX, kunye nophicotho lweenkampani ezininzi ezidumileyo zangaphandle (ezifana neWalmart, i-Ofisi Depot, iDisney, njl.). Iimveliso zethu zenziwa ikakhulu kwi-2: kwi-high-frequency workcraftsship njengeengxowa zokufayilisha, i-ring binder, ibhodi yokunamathisela, isikhwama sepensile, isikhwama sokugcina; kumsebenzi wokuthunga njengepotfoliyo, isibophelelo seziphu, isingxobo sepensile, ibhegi yokuthenga, ibhegi yezithambiso, ibhegi yekhompyuter njl.njl. Inkampani yethu izimeleyo kubuchule bokuyila nokuphuhlisa, kukho uluhlu olubanzi lweengxowa zokubhala, isitayile esigqwesileyo, umgangatho ophezulu. Ithunyelwe kumazwe amaninzi nakwimimandla efana neYurophu, eUnited States, eJapan, njl.njl. Zifumene igama elihle kakhulu kumazwe ngamazwe.
Ukusukela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lwehlabathi ngokuthobela umgaqo womgangatho kuqala. Iimveliso zethu ziye zafumana igama elihle kakhulu kushishino kunye nokuthembeka okuxabisekileyo phakathi kwabathengi abatsha nabadala. Iimveliso zethu zathengiswa kakuhle ngaphakathi nangaphakathi, kubandakanya iYurophu, iMelika, umzantsi-mpuma, uMbindi Mpuma kunye namanye amazwe kunye nemimandla. Sinikela ingqalelo ngakumbi kumgaqo-nkqubo wolawulo lwemfezeko, inzuzo efanayo kunye nomthengi kuqala; Inkampani yethu ibisoloko ihlawula iinzame zokuyila ngakumbi kwaye ithembekile; Sinqwenela ngokunyanisekileyo ukubamba izandla kunye nabahlobo abatsha kunye nabadala ukuze sakhe ingomso lethu eliqaqambileyo!